H banner, imwe mhando yemureza ine rectangular chimiro, inozivikanwawo seBlock mureza, Edge mureza kanaTelescopic Flag.Recatangle mureza vane nzvimbo yakakura inodhinda kupfuuraminhenga mirezakana mireza yemisodzi, ita kuti mureza uratidzike zvakanaka chero nguva, wakanyatsokodzera kukwidziridzwa kwepamusoro mukati nekunze.3 makore garandi yemugadziri pamureza.
Zvishandiso: Nesarudzo yemabhesi kuti aenderane nechero pasi, Rectangle mureza unogona kushandiswa mune yakawanda mamiriro ezvinhu, semuenzaniso kusarudzatsoka yemotokariinokodzera mijenya yemotokari, danda repasi rezviitiko zvekunze, nheyo yesimbi yemamiriro emhepo kana indoor trade show.
H banner, imwe mhando yerectangular mureza, inozivikanwawo seBlock mureza, Edge mureza kana Telescopic mureza, inogona kuita kuti mureza uratidzike zvakanaka chero nguva.Recatangle mireza ine nzvimbo huru inodhinda kupfuuramisodzi mirezakana mireza yeminhenga, inokodzera mameseji ekushambadzira epamusoro uye kushambadzira.
(1) Carbon composite material inobvumira ma pole seti kukotama uye kuzununguka mumhepo asi zvisiri nyore kutyoka kunyangwe pakaoma mamiriro ezvinhu.
(2) Mapango ekutanga kabhoni akaiswa nebhegi rekutakura rinosanganisirwa - rakareruka uye rinotakurika.
(3) Nzvimbo yakakurisa inodhinda ichiita kuti inyatsokodzera kusimba, kukwirisa mameseji ekushambadzira uye kushambadza.
(4) Kuisa plug-in kuri nyore kuunganidza.
(5) Metal mhete kuwedzera kushandisa upenyu.
(6) Yakasiyana-siyana yebasa rinoremabase optionskuti ikwane chero nzvimbo & mamiriro."Spin mahara" zvishandiso kuti mureza wako usavhiringike.
Size Display dimension Mureza size Pole chikamu Huremu hwehuremu paseti
H2.1m 2.1m 1.7*0.7m 3 0.9kg
H3.0m 3.0m 2.5*0.7m 3 1.12kg
H4.2m 4.2m 3.3*0.7m 4 1.5kg
Tsvaga zvimwe zvedu zvimwemureza hardware, mureza mabhesiuyeaccessories.
Zvakapfuura: 4 mu1 Sistimu
Zvinotevera: S Banner(Mnhenga)